Ny kinetika fanamafisana induction ho an'ny famonoana vy ny vy Ny kinetika fanamafisam-peo fampidirana ho an'ny famonoana vy amin'ny tany dia miankina amin'ny antony: 1) izay mitaona ny fiovan'ny fefy elektrika sy ny metaly vokatry ny fiakaran'ny mari-pana (ireo fiovana ireo dia miteraka fiovana amin'ny habetsahan'ny hafanana entina amin'ny… Hamaky bebe kokoa
Sokajy Technologies Tags induction heating, sehatra fanamafisana induction, fanamainana quenching heater, milina famonoana induction, faritra famonoana induction, rafitra famonoana induction, famonoana olona ambonin'ny tany, famonoana olona ambonin'ny tany, vy famonoana ambonin'ny tany
Reactors Heating Indact Heating Reactors Tank-Vessels Manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny fanamafisana induction izahay ary nanamboatra, namolavola, nanamboatra, nametraka ary naniraka rafitra Vessel sy Pipe Heating ho an'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao. Noho ny rafitra fanamainana izay tsotra sy azo itokisana tanteraka, ny safidy fanafanana amin'ny fampidirana dia tokony heverina ho… Hamaky bebe kokoa
Sokajy Technologies Tags fampidirana fantsom-panafanana, fampidirana reactor fanafanana, tanky fanafanana, induction heating, reacteur fanafanana induction, tanky reacteur fanafanana induction, tanky fanafanana fampidirana, sambo fanafanana fampidirana, tanky reactor
Maninona no misafidy fanafody fanatanjahan-tena sy izay tombontsoa azo
Sokajy Technologies Tags tombony amin'ny fanamafisana ny induction, induction heating, tombony azo avy amin'ny fahana, tsara ny fametrahana ny induction, Nahoana no misafidy indraindray, maninona no mifidy hafanana fanentanana
Fampidiran-drivotra fampidiran-drano fanangonam-bolo
Induction Heating dia ampiasaina hanasitranana ny fikajiana organika toy ny loko amin'ny metaly fototra amin'ny famokarana hafanana miaraka amin'ny famongorana azy. Ny fanasitranana dia midika izany fa avy amin'ny fahamendrehana ny fironana amin'ny famolavolana fahavoazana. Ny karazam-panaovana dia ny fangetahana ny loko amin'ny metaly.
Fanamafisam-peo famokarana metaly amin'ny adhesive induction curing Ny mari-pana dia ampiasaina amin'ny fomba amam-pitrandrahana maro, toy ny fampiasana adhesives amin'ny hafanana mba hamokarana takelaka mipetaka, kiran-tsoavaly ary singa miendaka. Ny vatany dia matetika mifandray amin'ny randranihan'ny karandoha amin'ny famokarana motera madinika. Ao amin'ny milina fanaovana kopia, ny singa plastika dia mifamatotra amin'ny randran-trano alimina; Ny lakaoly vita amin'ny plastika dia ampiasaina mba hitazonana vy amin'ny vy. Raha vantany vao mipoitra ny milina, dia mihamafana ny tetezana ary nosoloana ny foitra.
Modern induction heating dia afaka mamaha ny maro amin'ireo olana ireo. Ny fanamainana amin'ny induction dia manome hafanana azo antoka, azo henoina, tsy mifandray ary matanjaka ara-pahasalamana farafahakeliny, mba hahafahana manatanteraka ny fe-potoam-piasan'ny fotoana sy ny fotoana. Azo atao amin'ny alalan'ny fametrahana solosaina amin'ny famatsiana herinaratra matanjaka ny famokarana faratampony. Ho famafana ireo dingana fanampiny ho an'ny famoahana sy famoahana ireo fatana, dia azo ampidirina ao anatin'ny tsipika famokarana ny toeram-pitrandrahana hafahafa. Farany, ny fanamafisana ny induction dia azo tanterahana amin'ny tontolo madio, fari-piainana na atmosfera manokana, izay mamela vahaolana manasitrana miavaka.
Na dia ampiasaina amin'ny metaly na fitaovana mitarika hafa aza ny fanamafisana ny indostrialy, ny plastika sy ny fitaovana hafa tsy mitantana azy dia matetika mahamay be loatra amin'ny fampiasana metaly mitondra metaly mitondra ny hafanana. Fitaovana mahazatra RF RF induction curing ny rindranasa dia manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 60kW, miankina amin'ny ampahany sy ny fangatahana fampiharana.
Sokajy Technologies Tags induction curing, fanasitranana fanasitranana, induction heating, induction Organic Coating, bika